> Resource > Apps > Sida loo rakib Apps on Nexus 7 ka PC
Iyada oo shaashad weyn oo dhalaalaya, Google Nexus 7 waa kiniin ah haboon inuu ka ciyaaro barnaamijyadooda ku yaal. Haddii aad soo bixi barnaamijyadooda badan oo xiiso leh on your computer, waxaa laga yaabaa inaad Ma sugi karo inaan iyaga ku rakibi on Nexus 7 ciyaaro. Si aad u rakibto barnaamijyadooda ku Nenus 7, waxaan idinku aad ugu boorinayna Tababaraha wejiyo Android.
Wondershare MobileGo for Android (Windows) waa sida tababare fiican Android. Iyada oo ay caawimo, waxaad ku rakibi karo barnaamijyadooda aad jeceshahay on your Google Nexus 7 muuqan. Intaa waxaa dheer, haddii barnaamijyadooda u ogolaan, kuwaasoo ah idinka ee ku rakiban kartaa Chine in kaarka SD oo bilaash ah ilaa intii kaadhka xusuusta telefoonka.
Fiiro gaar ah: Ka sokow Google Nexus 7, Wondershare MobileGo for Android sidoo kale si buuxda u badan qalabka Android, sida Nexus 4, Samsung S4 iyo HTC Mid ka mid X. Halkan, waxaad samayn kartaa calaamee dheeraad ah oo ay taageerayaan qalabka Android .
Sida loo soo dajiyo barnaamijyadooda ku Nexus 7
Download Tababaraha Android ah. Ku rakib iyo waxa maamula on your computer.
Tallaabada 1. Isku Google Nexus 7 kiniinka si PC via Wi-Fi ama cable USB
Labada Wi-Fi oo USB ayaa diyaar u ah ha kugu xiri Nexus Google 7 kombuyuutarka. Tababaraha Tani Android lagu ogaan doonaa shaxdan oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Nexus 7 rakibi Chine
Guji "rakib" furmo suuqa hoose si loo soo dajiyo barnaamijyadooda ku saabsan Nexus 7.
Ama, isku day inaad sidan. Raadi oo guji "Apps" geedka buugga bidix. Dhammaan barnaamijyadooda ku Nexus 7 muujiyaan ilaa uu furmo suuqa app. Waxaad ku eegaan karo app walba magiciisa, size, markii la rakibey meel badbaadiyo.
Guji "rakib" inay soo qaadaan suuqa kala file browser your computer ee. Dul in meesha laga daadiyo waa la badbaadiyey. Dooro barnaamijyadooda aad doonayay oo iyaga loo soo dajiyo. Guud ahaan, barnaamijyadooda badbaadi doonaa kaadhka xusuusta telefoonka. Haddii barnaamijyadooda u siiyaan fursad ay ku rakibo in kaarka SD aad, aad sax karaa Chine oo guji "dhaqaaji SD Card".
Si wanaagsan baad yeeshay! Apps ayaa lagu rakibay on your Nexus 7 guul leh. Waa arrin si fudud loo soo dajiyo barnaamijyadooda la Tababaraha Android this badan ahaantaa samayso. Hadda, waxaad isticmaali karaan barnaamijyadooda ku saabsan Nexus 7 si ay u ciyaari Socda.
Video hoose waxay ku saabsan tahay ku rakibidda barnaamijyadooda ku Nexus 7
Tag, oo isku day inaad MobileGo for Android si loo soo dajiyo app on Nexus 7!